siddhartha insurance limited(siddhartha insurance limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको सीईओमा वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री नियुक्त
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री नियुक्त भएका छन्। कम्पनीको हिजार बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले क्षेत्रीलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो। उनको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। बीमा समितिले गत साउन ३२ गते केसीलाई ४ वर्षका लागि कार्यकाल थप गर्न अनुमति दिएसँगै कम्पनी...
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आज सम्पन्न १९ औँ वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको कुल १५.७८९४ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गरेको छ। काठमाण्डौको बबरमहलस्थित सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवनमा आयोजित सभाले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.७८९४ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश (करसहित) अनुमोदन गरेको...
लाभांश पारित गर्न सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो १९ औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो वैशाख ५ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो जेठ २८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बबरमहलस्थित सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवनमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सद्वारा मास्क र स्यानिटाइजर प्रदान
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाण्डौलाई ५ हजार थान मास्क तथा २५ लिटर स्यानिटाइजर प्रदान गरेको छ। कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई मास्क र स्यानिटाइजर प्रदान गरेको हो। यसबाट नागरिकको सेवामा समर्पित राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीको...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो बुधबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीबाट कुल १५.७८९४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा १२ प्रतिशतले हुन आउने १२ करोड रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र ३.७८९४ प्रतिशतले हुन आउने ३...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स शाखा न्युरोडमा
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको काठमाण्डौको खिचापोखरीस्थित न्युरोड शाखा सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमन पौडेल तथा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाद्वारा संयुक्त रुपमा गरियो । पौडेलले कम्पनीको संस्थागत सुशासन अब्बल र अन्य सूचकांकहरुसमेत राम्रो रहेको बताउँदै...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका अधिकांश सूचक सकारात्मक, नाफा २२% वृद्धि
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । कम्पनीका खुद नाफा र बीमा शुल्क आम्दानीजस्ता सूचक सबल देखिएकाले समग्र वित्तीय स्वास्थ्य सकारात्मक देखिएको हो । गत वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म १४ करोड ६१ हजार खुद मुनाफा आर्जन गरेको कम्पनीले यस वर्षको सोही...